Shacabka Kismaayo oo kacabanaya Askar habeenkii dhac u geysta – SBC
Shacabka Kismaayo oo kacabanaya Askar habeenkii dhac u geysta
Shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ayaa ka cabanaya dhac iyo boob la sheegay ina y ku sameeyaan dad ku labisan dress-ka ciidamada Dowlada iyo kuwa Kenya ee dhowaan qabsaday magaalada Kismaayo.
Waxa ay sheegeen qaar kamid ah shacabka Kismaayo oo la hadlay qalabka warbaahinta in Xiliyada habeen kii ah dadka ay joojiyaan ciidan ku labisan dresska ciidamada Soomaaliya kuwaasi oo ka qaadaya wax alaale waxii ay gacanta ku sitaan .
Haween badan ayaa sheegay in laga qaatay qalab ay gacanta ku wateen sida Boorsooyinka yar yar oo ay ugu jireen agab kala duwan iyo taleefoonada gacanta .
Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMisom ee ku sugan Kismaayo ayaa iyagu xiliyada habeenkii ah xaafado ka tirsan magaaladaasi ka sameeya howlgalo balaaran oo ay ku sugayaan amaanka .
Dhinaca kale waxaa dib u bilowday dhaq dhaqaaqyadii waaweynaa ee ganacsiga magaalada Kismaayo siiba ganacsiga dekeda magaaladaasi, waxaana halkaasi ku soo xirtay makab u raran ganacsato soomaaliyeed kuwaasi oo badeecooyin kala duwan keenay .
Dadka murul maalka ah ee ku dhaqan magaalada ayaa maalmihii ugu dambeysay ka cabanayay shaqo lahaan maadaama ay dekeda weyn ee magaalada aanu ka soconeynin wax dhaq dhaqaaq ganacsi sidaasi u buuran.